FX Photo Studio HD: Mpanonta sary misy vokany tsara maro | Vaovao IPhone
Tao amin'ny Actualidad iPad dia efa niresaka taminao momba ireo mpanonta sary vitsivitsy ho an'ny iPad izahay, ohatra: Camera +, Snapseed ary rindranasa hafa hanovana ny sarinay noho ny vokatry ny retouching, mifanohitra, saturation ary fampitaovana hafa ahafahantsika manana sary folo, toy ny hoe mpaka sary.
Androany ny tranga FX Photo Studio HD, mpamoaka sary maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra (¡ampidino izany!) ary miaraka amina endrika tena manokana sy mitandrina, miaraka amin'i mihoatra ny 190 ny vokany izay hamerenanay ny sarinay ary mazava ho azy fa ny safidy hanafarana sy hanondrana ireo sary amin'ny tamba-jotra sosialy na amin'ny iPad anao manokana.
Rehefa mampiditra ilay rindranasa ilaintsika isika ampidiro amin'ny alàlan'ny fomba isan-karazany ny sarinay amin'ny fipihana eo amin'ny Load Photo of FX Photo Studio HD eo an-tampon'ny fampiharana: makà sary, ampidiro avy amin'ny iPad na avy amin'ny Facebook.
Raha vao nakarina dia tsy maintsy Karakarao izy ary, ekeo mba hidirantsika ny Pejy fandraisana ho an'ny famerenana sy fanovana ny toetra mampiavaka ny sary. Manana ampahany roa ao anatin'ny pejy voalohany izahay:
Menio tsara indrindra
Load sary: Mampakatra sary ho an'ny retouching.
Share: Zarao amin'ny tambajotra sosialy samihafa ny sary farany.
hanafoana ary avereno: Avereno na avereno.
Tools: Safidy hanangona, hanodinana, handanjalanja ary hanitsiana ireo toetra anatiny amin'ny sary toy ny saturation, contrad ...
Options: Ovao ny safidin'ny fampiharana: toy ny kalitaon'ny sary.
Menu eo amin'ny sisiny
Cateogry: Ny vokany dia voarindra amin'ny sokajy.
rehetra vokatry: Mampiseho antsika rehetra ireo vokatra 194 nisesy.
favoris: Ireo vokatra nomarihinay ho ankafizinay
Presets: Manampy kaody hampiasaina any aoriana.
Raha te hampiditra vokany amin'ny sarintsika dia mila mahita izany fotsiny isika vokatry Izahay dia mila ny sarinay ary tsindrio izany:
Indraindray, hanana ny fahafaha-manao izany isika ovay ny fikirana hamiratra, "habe" ary maro hafa:
Tandremo anefa, mandra-pahatonga antsika hanery «Ampiharo» ny vokany dia tsy ampiharina amin'izay manome antsika fahafaha-misoroka ny famongorana ny fotoana rehetra, rehefa tsindrio ny vokany, mijery mialoha antsika io fa tsy voavonjy.
Raha hijery ny sary voalohany sy hahitana ny tsy fitoviana amin'ilay «namboarina miaraka amin'ny effets» dia tsindrio ny bokotra maso eo amin'ny ilany havia.
Ary afaka manana sary toy izao isika:
FX Photo Studio HD dia misy maimaim-poana amin'ny fotoana voafetraInona no andrasanao halefa? Io no fampiharana retouching sary tsara indrindra hitako tany amin'ny App Store!
Fanazavana fanampiny - Vaovao farany amin'ny Camera + ho an'ny iPad
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » FX Photo Studio HD: Mpanonta sary misy fiatraikany maro sy endrika mahavariana
FX Photo Studio, fampiharana iray hafa tsara maka sary sy mampihatra sivana amin'ny iPhone